Ukuphuculwa Kwekhaya | Etimnga 2021
Uphahla lwe-ridge vent pros kunye ne-cons kunye nesikhokelo sokuyila malunga nokuba yintoni kunye neentlobo ezithandwayo. Jonga ukuba ikhaya lakho lifuna i-ridge vent eluphahleni lwakho.
Iindidi zeetshimini (Isikhokelo soYilo)
Iindidi zesikhokelo seetshimini kubandakanya uyilo oludumileyo, indleko, ubuhle kunye neengozi kunye neempawu. Jonga imifanekiso yeetshimini ezahlukeneyo zekhaya.
Igalari yeentlobo ezahlukeneyo zamaphepha ophahla aneendlela ezithandwayo kunye nezinto eziluncedo kunye nezibi. Jonga imifanekiso yesinyithi, edityanisiweyo, ukhuni, iithayile kunye nophahla lwendalo.
Indlu yeTinted House Windows Pros and Cons
Indlu enombala iifestile ezilungileyo kunye neengozi ngendleko kwaye nokuba kufanelekile ukuba ziyile, imfihlo, ukhuseleko lwe-UV kunye nokunciphisa ukusetyenziswa kwamandla.
Esona sikhokelo sokugqibela kwiintlobo zophahla, ezona milo zaziwayo kunye nezinto zophahla. Jonga igalari yethu yezitayile zophahla kwaye ufumane eyona ilungileyo yendlu yakho ..
Isikhokelo sophahla olumnyama lwamnyama kunye nobubi malunga nokuba ziyintoni kunye nezibonelelo. Jonga ukuba ngaba i-shingles emnyama ingumbono olungileyo kuyilo lwendlu yakho.
Isikhokelo sokugqitywa komgaqo wekhonkrithi ngeendlela ezikhethiweyo zoyilo kunye nemibono yekhaya lakho. Jonga iintlobo ezahlukeneyo zeendlela zekhonkrithi kunye nokugqitywa.
Isoftware yoyilo lweSolar (yeNkqubo eziPhambili zePhotoVoltaic)
Isikhokelo kuyilo lwesoftware enezona zinto zibalaseleyo zokwenza inkqubo ye-photovoltaic yekhaya lakho. Jonga indlu yoyilo lwenkqubo yelanga.
Ngaphantsi Kokugquma Ubushushu (Iinkonzo neengozi)
Isikhokelo kumgangatho ongaphantsi kwesilingi kunye neengozi kunye neendidi ngeentlobo ezithandwayo ezinje ngeglasi yeglasi, igwebu lokutshiza, uboya bamatye kunye nebhodi yegwebu.
Isikhokelo sendlela yokuboniswa komgaqo obandakanyiweyo kubandakanya ukuba yintoni, uyilo, indleko, ukutywina kunye nokulungisa kunye nendlela ethelekisa ikhonkrithi rhoqo.
Iidriveways zangoku (Iingcamango zoyilo)
Ezi ndlela zangoku zokuhamba zinemibono emangalisayo yoyilo. Izinto ezidumileyo zokuqhuba ezibonisiweyo yitela, ikhonkrithi, igrabile, iipeyinti zezitena, isileyiti kunye necobblestone.
Izimvo zeSango leDrive (Isikhokelo sokugqibela)
Isikhokelo sokugqibela sezimvo zesango lokuqhuba, ukutyibilika kunye noyilo olunokurhoxiswa. Bona izinto ezilungileyo nezingalunganga zohlobo ngalunye lwesango lokuhamba kunye nemifanekiso yezona zilungileyo ...
ISheetrock vs Drywall (Iindidi kunye nesikhokelo soBungakanani)
Isikhokelo seSheetrock vs drywall egubungela ubungakanani obudumileyo, iintlobo, iindleko kunye nenqanaba lokugqiba. Fumana iintlobo ezifanelekileyo ze-drywall kwiiprojekthi zakho zokulungiswa kwekhaya
Yintoni iBrickmold emnyango? (Isikhokelo soYilo)
Fumanisa ukuba yithini isitena emnyango kubandakanya iintlobo ezahlukeneyo zecasings, ubukhulu kunye nezitena vs akukho minyango yezitena.
Ubungakanani befestile esemgangathweni (iitshathi zoBungakanani kunye nesiKhokelo soBungakanani)
Isikhokelo kubungakanani befestile obuqhelekileyo kubandakanya iitshathi zesayizi zeentlobo ezithandwayo kunye nobukhulu. Jonga ububanzi befestile kunye nokuphakama kunye neengcebiso zokulinganisa.
Iindidi zeWindows (Isikhokelo soYilo lokuGqibela)
Iindidi zesikhokelo sokuyilwa kweewindows ngezinto ezithandwayo zesakhelo, izitayile, indleko kunye neempawu. Jonga imifanekiso yeefestile ezahlukeneyo zekhaya lakho.
Iindleko zoMgangatho wokhuni (i-Injini kunye neHold Hardwood)
Umthi okhuni lukhetho lokuqala kuninzi lwabanini bamakhaya xa kufikwa kumgangatho wamakhaya. Fumana indleko zomgangatho wokhuni kwaye ubone ezona ntlobo zaziwayo zomthi ezisetyenzisiweyo
Imibala engaphambili yoMnyango (Iingcamango zePeyinti kunye neentsingiselo zoMbala)
Igalari ebonisa imibala yomnyango wangaphambili kunye nokuphonononga iintsingiselo zazo. Fumanisa ukuba yeyiphi imibala oza kuyipeyinta umnyango wakho wangaphambili ngokusekwe kubuntu bakho kunye nesimbo yoyilo
Iindidi ezithandwayo zokuhamba ngeendlela kubandakanya imibono yoyilo, indleko kunye nokulunga kunye nokubi. Jonga imifanekiso yekhonkrithi, ipavumente, ilitye legrabile, ilitye eliqhekezayo kunye neendlela zezitena zekhaya lakho.
ukuthengiswa kweringi yedayimani ngoLwesihlanu omnyama
ndizokuphulukana naziphi izibonelelo xa nditshata
bukhoma imiphezulu yeetafile
iinc nc driver name change
Izihlokwana ezitshatileyo zeenwele ezimfutshane
uyilo oluncinci lwendlu
joe jonas sophie Turner utshatile